ट्राफिक भनेको के हो ?
by Anuj Bhai April 22, 2020
अनलाइन मार्केटिङ क्षेत्रमा धेरै प्रयोग हुने शब्दहरु मध्ये एउटा शब्द हो, ‘ट्राफिक’ । यो ‘ट्राफिक’ शब्द अन्य सामान्य बोलिचालिमा पनि प्रयोग गरिने शब्द हो । सामान्यतय हामीले बुझ्ने ‘ट्राफिक’ को अर्थ भनेको सडकमा यातायातका साधनहरुलाई सहि रुटमा चलाउन सहयोग गर्ने ट्राफिक प्रहरी नै ‘ट्राफिक’ हो । तर, अनलाइन मार्केटिङ प्रयोग गरिने ‘ट्राफिक’ शब्दको खास अर्थ सडकमा यातयातका साधनहरुलाई सहि रुटमा चलाउन सहयोग गर्ने ट्राफिक प्रहरी होइन । अनलाइन मार्केटिङमा प्रयोग गरिने ‘ट्राफिक’ शब्दलाई ‘लिड्स’ पनि भन्ने गरिन्छ ।
यहि ‘ट्राफिक’ भन्ने शब्दलाई सहि ढंगले बुझ्न नसक्दाखेरी अनलाइन क्षेत्रमा सफल हुन सकिरहेका हुँदैनन् । नेपालका धेरै युवाहरुले अनलाइन क्षेत्रमा काम गर्न चाहन्छन् तर, थोरैले मात्र अनलाइन सम्बन्धी गहिरो खोज अनुसन्धान गरेको पाइन्छ । त्यहि खोज अनुसन्धानकै विषय अन्तर्गत ‘ट्राफिक’ भन्ने शब्द पनि जोडिएर आएको हुन्छ ।
तपाइ यदि अनलाइन क्षेत्रमा काम गर्न चाहनुहुन्छ, यस क्षेत्रमा आफ्नो करियर बनाउन चाहनुहुन्छ, तपाइ अनलाइन बिजनेश गर्न चाहनुहुन्छ भने यस्तै केहि प्रमुख विषयहरुको बारेमा गहिरो अध्ययन गर्न जरुरी हुन्छ । तिनै मध्येको एउटा शब्द हो ‘ट्राफिक’ ।
‘ट्राफिक’ शब्दलाई अनलाइन मार्केटिङ क्षेत्रका विज्ञहरुले विभिन्न तरिकाले परिभाषित गरेको पाइन्छ । परिभाषा गर्ने तरिका बेग्लै भए पनि सबैको अन्तिम निचोड एउटै रहेको पाइन्छ ।
त्यो हो, “बजार ।” हो, सामान्य अर्थमा ‘ट्राफिक’ भनेको एक किसिमको ‘बजार’ नै हो । जहाँ विभिन्न समुदायका, विभिन्न प्रकारका मानिसहरुको भिड हुन्छ । ति मानिसका भिड नै एक प्रकारको ‘ट्राफिक’ हो ।
यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ, तपाई एउटा होटल स्थापना गर्ने सोँचमा हुनुहुन्छ भने, सर्बप्रथम धेरै मानिसको जमघट हुने वा मान्छेहरुको भिडभाड हुने ठाउँलाईनै रोज्नु हुन्छ । किन भने त्यहि भिडका मानिसहरु मध्ये कोहि न कोहि तपाइको ग्राहक बन्न सक्ने धेरै सम्भावना हुन्छ । उनीहरुबाटै तपाई आर्थिक लाभ लिन सक्नुहुन्छ । एकान्तमा होटल खोल्नु मूर्खता सिवाय अरु केहि हुनै सक्दैन । यो नियम अनलाइन मार्केटिङमा पनि लागु हुन्छ ।
एउटा अनलाइन मार्केटरले पनि कुनै पनि कम्पनीको उत्पादन वा सेवालाई कस्तो बजारमा खपत गर्न सकिन्छ वा कुन ठाउँको कस्तो किसिमको मानिसहरुको बीचमा सफलता पूर्वक प्रबद्र्धन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अध्ययन गर्न अत्यन्त जरुरी हुन्छ । त्यहि अध्ययनको आ धारमा ‘ट्राफिक’ खोज्ने काम गरिन्छ । मानौं म अहिले विभिन्न कम्पनीका कोर्षहरु अनलाइनका माध्यमबाट विक्रि गरिरहेको छु । अनलाइन कोर्ष, इन्फर्मेशन प्रडक्टहरु विक्रि गरिरहेको छु । (इन्फर्मेशन प्रडक्ट को बारेमा पछिल्ला टपिक्समा विस्तृत जानकारी हुने नै छ ।) सर्ब प्रथम त मैले विक्रि गर्ने कोर्षहरु कसले खरिद गर्न सक्छन् भन्ने बारेमा अध्ययन गरेर उपभोक्ता वा प्रयोगकर्ताहरुको खोजि गर्दछु । मैले बेच्ने कोर्ष कस्ले किन्छ ? कुन किसिमका मानिसहरुले खरिद गर्न चाहन्छन ? कसलाई यो कोर्ष उपयुक्त हुन सक्छ ? यो कोर्षबाट कसले फाइदा लिन सक्छ ? कुन उमेरकालाई यो कोर्ष उपयुक्त हुनसक्छ ? यसको बारेमा गहिरो अध्ययन, अनुसन्धान र अभ्यास गरिसकेपछि त्यो अनुसारको बजार ‘ट्राफिक’ खोज्ने काम गर्दछु ।
विशेषगरि म अनलाइन मार्केटिङ कार्ष बेच्ने गर्दछु । यसको लागि अनलाइन मार्केटिङ कसलाई आवश्यक पर्दछ ? कुन क्षेत्रका ? कुन उमेर समुहका ? कति योग्यता भएका ? कस्तो सीप क्षमता भएकाहरुले यो काम गर्न सक्छन् ? र यसबाट फाइदा लिन सक्छन् भन्ने बारेमा मैले इन्टरनेटको माध्यमबाट बजार खोजिरहेको हुन्छु । यहि मेरो खोजिमा रहेका ब्यक्तिहरु नै वास्तवमा मेरा ‘ट्राफिक’हरु हुन् ।
यसको अर्थ बजारमा रहेका धेरै मानिसहरु मध्ये पनि आफ्नो कम्पनीको सामान वा सेवा खरिद वा उपभोग गर्ने सक्ने संभावित ब्यक्तिहरुलाइ नै ‘ट्राफिक’ भनेर बुझिन्छ । अथवा कुनै पनि कम्पनीको संभावित ग्राहकलाई नै ‘ट्राफिक’ भनिन्छ । यसलाई कतिपयले लिड्स वा कसैले ‘पोटेन्सीयल कस्टुमर’ पनि भनिन्छ । यसलाई आ–आफ्नै ढंगले परिभाषा दिन सकिन्छ ।
अनलाइन मार्केटिङमा तपाइको ‘ट्राफिक’ लिष्ट जति धेरै हुन्छ उति नै तपाइको ब्यापार फैलाउन सक्ने र आर्थिक लाभ लिन सक्ने मौकाहरु हुन्छन् । अनलाइन मार्केटिङको क्षेत्रमा मानिसहरु किन असफल हुन्छन् भने, ‘ट्रापिक’को कमी हुनुले पनि हो । ‘ट्राफिक’ किन कम हुन्छ भन्दा बजारको अध्ययन अनुसन्धान र अभ्यासको कमीले हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । अनलाइन मार्केटिङ क्षेत्रमा ‘ट्राफिक’ जति धेरै भयो उति नै खट्न सक्नु पनि पर्दछ । आफ्नो ‘ट्राफिक’लाई सकेसम्म ख्याल राख्न सक्नु पनि पर्दछ । कम्पनीमा ज्वाइन भएर मात्रै अनलाइन मार्केटिङबाट फाइदा लिन सकिँदैन । जतिसक्दो ‘ट्राफिक’ जेनेरेट गर्ने र उनीहरुको जिज्ञासाहरु हरदम सकरात्मक ढंगले समाधान गर्ने कोशिस गर्नुपर्दछ । ‘ट्राफिक’सँग जति नजिक हुन सक्यो उति नै कम्पनीको उत्पादनहरु विक्रि गर्न सकिने हो । जसले गर्दा मार्केटरलाई पनि फाइदा हुने हो । बिना रणनीति कम्पनीको उत्पादन र सेवालाई बजारमा प्रबद्र्धन गर्न सकिँदैन । यस्तो बेलामा सफलता पाउन गाह्रो मात्र होइन असम्भव नै हुन्छ ।
एफिलेट मार्केटिङ गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
Tags: Anuj Bhai Blog, best business in nepal, business idea in nepal, business nepal, earn money online in nepal, good business in nepal, how to make money online in nepal, how to start online business in nepal, Internet Marketing, Internet Marketing In Nepal, Nepalese Internet Marketer Story, small capital business in nepal, top 10 business in nepal